Markab dagaal oo uu Faransiisku leeyahay oo la wareegay hoggaaminta ciidamada badda ee MY ee Soomaaliya jooga - Sabahionline.com
Markab dagaal oo uu Faransiisku leeyahay oo la wareegay hoggaaminta ciidamada badda ee MY ee Soomaaliya jooga Abriil 11, 2012
Markabka dagaal ee Faransiiska ee la yiraahdo FS Marne ayaa noqday markabka cusub ee hoggaaminaya ciidamada badda ee Midowga Yurub (MY) ee jooga Soomaaliya, oo iyagu masuul ka ah in ay la dagaallamaan burcad-badeedda gobolka Geeska Afrika, Ciidanka Badda ee MY (EU NAVFOR) ayaa Isniintii (10-ka April) warmuriteed ku sheegay. Qodobbo la xiriira
Midowga Yurub oo shaaciyey barnaamij loogu talaggalay amniga badmaaxidda Bariga Afrika
Saraakiil Jabuutiyaan ah oo booqday markab ay leeyihiin ciidamada badda Japan
Ciidamada badda Midowga Yurub oo qalab burcad-badeed ku burburiyay xeebaha Soomaaliya
Marne ayaa talada kala wareegaya markabkii dagaal ee reer Isbeyn oo la oran jirey ESPS Patino, oo isagu afartii bilood ee la soo dhaafay ciidamada hoggaan u ahaa, iyadoo uu u talinayey Admiraal Dhexe Jorge Manso. Xafladdii kala warejinta oo ka dhacday Jabuuti ayuu Manso sheegay sida uu ugu hanweyn yahay kooxda EU NAVFOR “oo u soo shaqeeyey si maddaalennimo ah si ay u daba galaan oo una arbushaan kooxaha weerarrada burcad-baadeednimo ee hubaysan, oo iyagu ka qawlaysta biyaha ka baxsan Geeska Afrika” ayaa lagu yiri war-murtiyeedka. Taliyaha hawsha la wareegaya, Admiraal Dhexe Jean-Baptiste Dupuis, ayaa sheegay in ay sharaf ahayd in laga hoos shaqeeyo bad-maaxayaasha iyo ciidamada badda ee Patino, “oo iyagu qabtay hawl aad u wanaagsan, yareeyeyna halista ka jirta xeebaha Soomaaliya.” Hawlgalka EU NAVFOR ayaa billowday December, 2008-dii ka dib markii ay aad u korodhay burcad-badaynta ka jirta Biyo xeebeedka geeska Afrika, ilaa iyo berigaana, waxay EU NAVFOR sheegaysaa in maraakiibta MY aya samaynayeen gaaf-wareegyo burcad-badeedda lagala hortagayey oo ay muddadaana difaaceen 843,000 oo tan oo cunto ah oo loo waday dadka Soomaaliyeed. Muxuu kula yahay qoraalkan?